Boriborintany VI: zaza iray matin’ny kitrotro | NewsMada
Nahafaty zaza ny aretina kitrotro teny amin’ny boriborintany VI, fokontany Ambohimiadana Atsimo. Voaporofon’ny dokotera eny an-toerana kitrotro ny nahafaty ity zaza ity.
Tsy nitazam-potsiny ny kaominina Antananarivo Renivohitra fa nandefa avy hatrany ny ekipa avy ao amin’ny amin’ny BMH (Bureau municipal d’hygiène), nandraraka ranom-panafody, teny amin’ny toerana manodidina ny trano fonenan’ny niharam-boina.
Tanjona amin’izao ny hamonoana ireo bibikely sy ny otrikaretina mety hiparitaka manodidina ny trano, hitsinjovana hatrany ny fahasalaman’ny daholobe.
Araka ny voalazan’ireo mponina manodidina, efa ho roa izao ny zazakely maty voan’ny aretina kitrotro teny amin’iny toerana iny nandritra ny herinandro izay. Araka izany, hanamafy ny fanadiovana ny boriborintany fahaenina. Nentanina amin’ny fanaovam-baksiny ny zaza sy ny ankizy ihany koa ny mponina ho fiarovana amin’ity aretina kitrotro efa mby an-koditra sy amoizana ain’olona ity.
Tao anatin’ny roa volana izao ny firongatry ny aretina kitrotro ary tsy mifidy na ankizy na lehibe. Efa mivoaka ny mibontsimbontsina amin’ny vatana vao taitra ny ray aman-dreny ka mitondra ny zaza eny amin’ny dokotera.
Fanaviana, malain-komana, marary tenda… no iantombohan’ny aretina. Heverin’ny ray aman-dreny ho fanaviana tsotra izany ka fampidinana hafanana ihany ny omeny ny zanany. Efa mihombo ny aretina vao mandeha eny amin’ny dokotera, matetika, ny olona, raha ny fanazavan’ny dokotera hatrany.